Maxkamadda Sare Ee Kenya Oo Go’aan Aan Caadi Aheyn Gaartay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamadda Sare Ee Kenya Oo Go’aan Aan Caadi Aheyn Gaartay
Xuseen Axmed 20 November 2017 20 November 2017
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa goordhow go’aan ka soo saartay doorashadii 2aad ee ku celiska ahayd ee bishii la soo dhaafay ka dhacday Dalka Kenya.
Maxkamadda ayaa xukmisay in Madaxweynaha hadda talada haya uu yahay Madaxweynaha Saxda ah ee Kenya hoggaamin doona shanta sanadood ee soo socota,waxaana ay laashay dacwaddii ay gudbiyeen mucaaridka ee ahayd in doorashadii labaad aysan ahayn mid sax ah.
Lix Garsoore oo ku sugnaa Maxkamadda ayaa ayiday doorashada, waxaana ay laaleen dacwad ka dhan ah dib u doorashada Mr Uhuru oo mucaaradka gudbiyeen Maxkamadda sare.
Indhaha dadka Kenyaanka ah waxaa ay maanta saarnaayeen Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Kenya, David Maraga,kaas oo 1dii September laalay natiijada doorashadii 8ddii August,waxaana uu maanta mar kale go’aamiyay mustaqbalka Kenya oo uu u go’aamiyay Kenyatta.
Magaalada Nairobi iyo degaannada taageerayaasha Uhuru Kenyatta waxaa ka billowday dabaaldeg lagu soo dhaweynayo go’aanka Maxkamadda sare ee Dalka Kenya.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Oo Maanta U Safray Dalka Itoobiya + Sawirro